Luz de Maria - Nampiditra ny Fiangonana ny Devoly - Fanisana ny fanjakana
Luz de Maria - Nampiditra ny Fiangonana ny Devoly
Md Michael Arkanjely ho Luz de Maria de Bonilla	tamin'ny 24 Jolay 2020:
Zanaky ny Trinite Masina indrindra ianao; Voninahitra sy voninahitra anie ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina, mandrakizay mandrakizay. Amen.
Ry malalan'Andriamanitra, katsaho fatratra izy mba hahitan'ny fonareo ny filan'izy ireo ao anatin'ny loza.
Io no fotoana hikambana sy haharitra amin'ny Vahoakan'Andriananitra, rehefa maharitra ny "taloha" sy ny "aorian'ny zanak'Andriamanitra".
Ny Vahoakan'andriamanitra dia mitohy nefa tsy takatra, antsoina hoe adala sy adala noho ny fanohizan-tena ho famalian'Andriamanitra. Tsy ho takatra aminao ny zanak'olombelona; hampahory, enjehina, fanaratsiana ary hosimbana ianao hampidinina anao.
Aza kivy, zanak 'Andriamanitra: ny tanjaky ny vavaka no manome aina ny Vahoakan'Andriamanitra - ny vavaka amin'ny asa rehetra sy ny zavatra atao, ny vavaka amin'ny fo. Aza manao tahaka ny mpihatsaravelatsihy, mba ho hita (cf. Mt 6: 5). Mijanona amin'ny vavaka tsy tapaka, mahereza, mahereza.
Voahitsoka ny Vahoakan'Andriamani-tra, tsy mifikitra amin'ny tsy finoana.
Maratra ny devoly ary mitady fanahy hankany amin'ny helo, mandresy eo imason'ny mpanara-dia azy rehefa tsy mitandrina ianao ary tonga miasa sy manao tahaka ny Fariseo. Manomboka ny fahajambana ara-panahy eo amin'ny rahalahinao sy ny adihevitra ianao, noho ny faniriana tsara.
Ny devoly, rehefa nanala ny Fiangonan'ny Mpanjakanay dia nanosika anao hiasa sy hanao izay ratsy.
Zanak'Andriamanitra, ny devoly mahita fanahy matanjaka: mahalala azy ireo izy, mahalala ny fahalemeny, ary alohan'ny ahafahany mihetsika ho an'ny rahalahiny sy rahavaviny mandritra ny fotoam-pahoriana lehibe ho avy, dia mahatonga azy ireo hirona ara-pihetseham-po izy ireo mba hampielezana sy hampihorohoro azy ireo. . Fantatry ny devoly fa mora miditra ao anaty takelaka ny olona "mampihetsi-po; Ataony ho matimaty izy ireo, ary raha tsy tsikaritr'izy ireo, manomboka amin'ny fotoana iray ka hatramin'ny manaraka dia mahita ny ratsy izy ireo.
Mianà finoana matanjaka tsy mihetsika: aza manasaraka ny tenanao amin'Andriamanitra - miarova tena, ary aza latsaka amin'ny fakampanon'ny devoly.
Ilaina ny finoana matanjaka amin'ny vanim-potoana iainanan'ny ady eo amin'ny hazavana sy ny haizina. (jer. Jn 3:19).
Amin'ny maha Vahoakan'Andriamanitra anao, dia mahita ny tenanao ianao amin'izao fotoana izao: ny fahatanterahan'ny fanambarana nambara nataon'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Tompontsika ary renin'ny lanitra sy tany, mba hiomanananao, hahatakatra ny maha zava-dehibe ny ho tanteraka noho ny fireharehan'ny olona.
Ry zanak'Andriamanitra, hitohy ny fisedrana, hihatra ny loza hafa. Lasa miboridana ao anaty toerana ny olona; hiseho ny hanoanana ary mitombo ny fanirery, ny aretina, ny fanenjehana, ny fandrahonana, ny fanendrikendrehana ary ny tsy rariny mitombo. Ry zanak'Andriamanitra, aza manary fo, tazomy amin'ny fiarovana ny lalan'Andriamanitra ho an'ireo izay manaraka ny lalàn'Andriamanitra ary tia ny namany tahaka ny tenany. Mivavaha, mivavaha am-po.
Vahoakan'Andriamanitra, mandehana am-pitandremana, mitazona ny tanan'ny Vavintsika sy Reninay; aza misaraka aminy, fandrao ho voafitaka ianao; mivavaha amin'ny fonao ary miaraka amin'ny vadinay sy reninay ianao dia hanohitra ny fandrik'i Satana.
Raha tsy misy Andriamanitra ho ivon'ny fiainany dia tsy afaka hanohitra ny olombelona. Mila mandeha dingana iray ianao, fa aza miaina haingana. Mivavaha ary manaova famerenana ho famonjena ny fanahy.
Mivavaha, Vahoakan'Andriamanitra: hihozongozona ny tany.
Mivavaha, ry zanak'Andriamanitra: ny fahazavana avy amin'ny Fanahy Masina no manazava anao, ary ho hitanao ny soa nataonao, ny soa nataonao tsy nijanona, ny ratsy nataonao, ny namboarinao sy izay anananao. tsy amboarina. Ho hitanao eo anoloan'ny fitaratra ny fieritreretanao.
Zanaky ny Rainao ianareo. Miova fo alohan'ny hilatsahan'ny alina!
Iza no tahaka an'Andriamanitra?
Tsy misy tahaka an'Andriamanitra!
St Michael ilay Arkanjely
Arahaba, madio indrindra i Maria, bevohoka tsy misy ota
KOMPOANA NATAON'I LUZ DE MARIA
Ho an'Andriamanitra anie ny haja sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
Rahalahy sy rahavavy ao amin'ny Finoana.
St Michael the Archangel dia miangavy antsika mba hiaina mandrakariva ny maniry hampifaly an'Andriamanitra, izay mpamafy ny fitiavany amin'ny rahalahintsika.
Mandritra izany fotoana izany dia miantso antsika handinika sy hiomana amin'ny fotoana izay hahitantsika ny tenantsika ary handositra ny haizina. Andao hiandry, fa irak'Andriamanitra Fitiavana fa tsy hipetrahana.
← Ny ora amin'ny Famerenana amin'ny laoniny izao
Edson Glauber - Miverina any… →